यो हप्ताको राशिफल हेर्नुहोस : साउन ३१ गते आईतबार देखि भदौ ०५ गते शनिबारसम्मको….. – SUDUR MEDIA
यो हप्ताको राशिफल हेर्नुहोस : साउन ३१ गते आईतबार देखि भदौ ०५ गते शनिबारसम्मको…..
August 19, 2021 AdminLeaveaComment on यो हप्ताको राशिफल हेर्नुहोस : साउन ३१ गते आईतबार देखि भदौ ०५ गते शनिबारसम्मको…..
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) आन्तरिक यात्राको तय हँुनेछ भने गन्तब्यमा पुग्नको लागि बिभिन्न चुनौतिहरुको पार गर्नुपर्नेछ । माया प्रेममा धोका तथा पति पत्निबिचको सम्बन्धमा सामान्य मनमुटाब बढ्नेछ । व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकैनै समय खर्चिनु पर्नेछ । आफन्त,छिमेकि,दाजुभाईबाट धोका तथा बिश्वासघात हुनेछ काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । आर्थिक कारोबार बिग्रने हुदा काममा असजिलो महशुष हुनेछ । साथिभाईहरुको गलत संगतले नकरात्मक सोचको बिकास हुनेछ भने नियम बिपरित काम गर्न उक्साउनेहरु सक्रिय रहनेछन् । घर जग्गा तथा गाडि घोडाको व्यावसायबाट केहिमात्रमा लाभ लिन सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन प्राप्त हुनेछ । कृषि,सहकारि तथा पशुपालन व्यावसायलाई आधुनिकिकरण गरि केहि मात्रामा लाभ लिन सकिनेछ । साना तिना स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउँनेछन् । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा सफलता प्राप्त गर्न अलि बढिनै संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वा) पढाई लेखाईमा राम्रो प्रगति हुनेछ भने बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो गतिलो प्रश्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ । परिवार तथा सन्तानबाट तपाईले गरेको काममा सहयोग हुनेछ । माया प्रेममा बिश्वासको बाताबरण बढेर जानेछ भने पति पत्निबिच मायाको डोरो झनै कसिलो हुनेछ । न्यायलयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । बादबिवाद, प्रतिश्पर्धा तथा मुद्दा मामिलामा तपाईकै जित निश्चित छ । उद्योग व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानि हुने हँुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । लेखन कलाको बिकाश हुनेछ भने लेखेरै आफ्ना कुराहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । पराक्रम बडेर जानुका साथै कामहरु समयमा बन्नेछन् । छिमेकि दाजुभाई तथा आत्मिय मित्रहरुबाट भने जस्तो आर्थिक तथा भावनात्मक सहयोग मिल्नेछ । आईतबार तथा शनिबारको समय मध्ययम रहेकोले बोल्दा ख्याल गर्नुहोला बोलिको गलत अर्थ लाग्न सक्छ । कामहरु बिग्रने तथा समयमा गर्न नसकिने हुदा मान सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ ख्याल गर्नुहोला ।
मिथुन (का, की, कू ,घ, ङ, छ ,के,को,हा) समय राम्रो रहेकोले बैदेशिक क्षेत्रमा समय खर्चिने हरुले प्रशस्त रुपैया पैसा कमाउँन सक्नेछन् । राजनिति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष सहभागिता सहितको समर्थन पाईने हुनालेसमाज परिवर्तन गर्न जोस जागर बढेर आउँनेछ । समस्याका पर्खालहरु बिस्तारै ढल्दै जाने तथा सत्रु परास्त हुनेछन् । गित संगित तथा मोडलिङ पेशा व्यावसाय अगाल्नेहरुले आजको दिन मनग्गे आम्दानि गर्न सक्नेछन् । सभा समारोहमा सहभागि भई आत्मिय मित्रहरुका साथ मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्दै दिन कटाउँन सकिनेछ । आफुले माया गर्ने मान्छेलाई मन मुटुमा राख्न सकिने तथा सँगै बसेर भलाकुसारि गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । कुटुम्बसँग मिलेर गरिने कुनै पनि व्यावसायबाट प्रशस्त लाभ लिन सकिनेछ । दाजुभाई तथा छिमेकिसँग गरिने व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले प्रशस्त नाफा कमाउँन सकिनेछ भने अरुलाई प्रभाबित पारेर सजिलै काम लिन सकिनेछ । बिद्यामा सफलता प्राप्त हुनेछ भने छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय हुनेछ । जिवन शैलिमा सुधार हुनुको साथै समयको महत्व बुझ्दा अगाडि बढ्न सहज हुनेछ ।
कर्कट (ही,हू ,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) बुधबार सम्मको समय मध्ययम रहेकोले साना तिना कामका अल्झनु पर्दा पढाई लेखाईमा समय दिन सकिने छैन । कमर्शियल निर्णयहरु आजको दिन धाति राख्नु होला किनकी व्यापार व्यावसायमा घाटा लाग्ने योग रहेको छ । बैदेशिक यात्रा तथा यात्रासँग सम्बन्धित कामहरु हुनेछन् । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउने हुदा खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । पढाई लेखाईमा राम्रो नतिजा ल्याउँन प्रशस्त समय खर्चनु पर्नेछ । सुधारात्मक कार्यमा खर्च बड्नेछ भने अनाबस्यक ठाउमा बल तथा बुद्धि प्रयोग हुनेछ । बिहिबार बिहानदेखि समय तपाईकै पक्षमा आउँने हुनालेमान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिश्ठामा बृद्धि भएर जानेछ भने महत्वपुर्ण जिम्मेवारि सम्पादन गर्ने जिम्मा तपाईको काँधमा आउनेछ । कला,साहित्य तथा नृत्य प्रतियोगितामा सहभागि भई प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराई नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिने हुनालेआफन्त तथा साथिभाईहरु खुसि हुनेछन् । सांगितिक माहोलमा जमघट भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । माया प्रेमको बन्धन कसिलो भएर जाने योग रहेकोछ ।
सिहं (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) हप्ताको पहिलो दिन आईतबार कार्य सम्पादन गर्ने सवालमा समाजका अग्रज तथा बिशिष्ट ब्याक्तिहरु सँग भेटघाट हुनेछ । नयाँ नयाँ काम पाउँने तथा नोकरिमा बढुवा हुने योग रहेको छ । सोमबारदेखि समय मध्ययम रहेकोले व्यापार व्यावसायमा लगानि गर्ने वाताबरण नरहेकोले पर्ख र हेरको रणनिति अपनाउँनु नै ठिक हुनेछ । काममा तथा आय आम्दानि हुने ठाउँमा सत्रुका आखा लाग्न सक्छन् ध्यान दिएर काम गर्नुहोला । आम्दानि भन्दा खर्च बढ्ने हुनाले आर्थिक ब्याबस्थापन गर्न कठिन हुनेछ । पढाई लेखाईमा मन नजादा यो हप्ता अरुभन्दा पछि परिनेछ । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने पति पत्निबिच बिवाद सिर्जना हुनेछ । बिदेशबाट आयात हुने सामानको व्यापार व्यावसायबाट प्रशस्त नाँफा कमाउँन सकिनेछ भने बैदेशिक यात्रा तथा यात्रासँग सम्बन्धित कामहरु हुनेछन् । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउने हुदा उपचार खर्च बढेर जानेछ । सामाजिक काममा मन जानभएपनि जनताको समर्थन नपाउँदा कामहरु अथुरै रहनेछन् ।
कन्या (टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पा) हप्ताको पहिलो दिन अर्थात आईतबार शैक्षिक तथा धार्मिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । मठ मन्दिर तथा धार्मिक अनुष्ठानको यात्राको तय हुनेछ । निर्णायक पदमा हुनुहुन्छ भने आज गरिने निर्णयहरु राष्ट्रको पक्षमा हुनेछन् । सोमबारदेखि समय मध्यमय रहेकोले प्रशासनिक काम गर्दा ध्यान दिनुहोला राज्यबाट गलत आक्षेप लगाउनेहरु सक्रिय हुनेछन् । सामाजिक कामको सिलसिलामा ब्यास्त हुने समय रहेको भएपनि प्रतिफल शुन्य जस्तै हुनेछ । प्रतिश्पर्धिहरु हरेक क्षेत्रमा हावि हुने हुनालेसमयमा काम सकाउन मुस्किल पर्नेछ । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्र कमजोर हुने हुनालेतपाईको कमजोरिको अरुले फाईदा उँठाउन सक्छन् । माया प्रेम तथा पति पत्निबिचमा अरुको नकारात्मक टिका टिप्पणीले अबिस्वास पैदा हुनेछ ख्याल गर्नुहोला । खानपिन तथा मनोरञ्जन गर्दा ध्यान नदिए स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ । हप्ताको अन्त्यमा लामो दुरिको बैदेशिक यात्राको तय हुनेछ ।
तुला ( रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू ,त) समय उत्तम रहेकोले लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । आत्मिय मित्र तथा शुभचिन्तकहरुको साथ पाईने हुनालेजस्तो सुकै चुनौतिको पनि सामना गर्न सहज हुनेछ । प्रेम प्रशङमा दिन बित्ने तथा माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ । पति पत्नि बिचको सम्बन्ध सुदृड हुनुको साथै माया प्रेमको गाठो गसिलो भएर जानेछ । निर्णय क्षमतामा बृद्धि भएर जाने तथा कार्यक्षेत्रमा तपाईको निर्णयको उच्च सम्मान गरिनेछ । गित संगितमा बिषेश रुचि बढ्नेछ भने बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई पाखा लगाई नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिनेछ । आर्थिक सवालमा उठ्ने प्रश्नहरुको हल हुनेछ भने आम्दानिका नयाँ नयाँ बाटाहरु फेला पर्नेछन् । कृषि,पशुपालन,तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थजन्य उद्योगमा लगानि गर्दा भनेजस्तो नाँफा कमाउँन सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा अरुलाई उछिनेर अगाडि बढ्ने समय रहेको छ । सरकारि धन सम्पति तथा पैत्रिक धन हातलागि हुनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू ,ने,नो,या,यी,यू) अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्र कमजोर हुने हुनाले तपाईको कमजोरिको अरुले फाईदा उँठाउन सक्छन् । माया प्रेम तथा पति पत्निबिचमा अरुको नकारात्मक टिका टिप्पणीले अबिस्वास पैदा हुनेछ ख्याल गर्नुहोला । ऋण,रोग तथा संकटको सामना गर्नुपर्नेछ । गोप्य कुराहरु बाहिर आउन सक्छन् ध्यान दिएर काम गर्नुहोला । धन सम्पति तथा अचल सम्पति हराउन तथा लुटिन सक्छ सजक रहनुहोला । बुधबार तथा बिहिबारको समय राम्रो भएकोले उच्च पदस्थ ब्याक्तित्वसँग भेटघाट हँुने तथा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठा बडेर जानेछ । लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । आत्मिय मित्र तथा शुभचिन्तकहरुको साथ पाईने हुनालेजस्तो सुकै चुनौतिको सामना गर्न सहज हुनेछ भने टाडिएका मित्रहरुसँगको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । शुक्रबार तथा शनिबारको समय मध्ययम रहेकोले कार्यक्षेत्रमा प्रशस्त समय दिनुपर्ने तर न्यून पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउनु पर्दा मन खिन्न हुनेछ । घर परिवारमा दैनिक आउँने समस्याले सताउने हुदा मानशिक तनाब बढेर जानेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू ,ध,फा,ढा,भे) बादबिवाद तथा प्रतिश्पर्धाको लडाईमा प्रतिश्पर्धिहरुले निर्बिरोध तपाईको समर्थन गर्नेछन् भने सामाजिक काम गरि अरुको मन जित्न सकिनेछ । रोकिएर बसेका तथा अधुरा कामहरु केहि समय दिएर फत्ते गर्न सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा अरुलाई पछि पारि अगाडि बढ्ने समय रहेको छ । ब्याबसायिक यात्राको क्रममा नयाँ तथा सुन्दर दृष्यहरुको अवलोकन गर्न अवसर प्राप्त हुनेछ । नयाँ नयाँ साथिभाईहरु सँग भेटघाट गरि दिनलाई रङगिन बनाउन सकिनेछ भने माया प्रेम तथा पति पत्निबिचको सम्बन्धमा बिश्वासको बाताबरण मजभुत भएर जानेछ । बुधबारदेखि समय मध्ययम रहेकोले हतियार,फलाम तथा आगो सँग सम्बन्धित काम गर्दा वा प्रयोग गर्दा हासियारि अपनाउँनु होला चोटपटक लाग्न तथा दुर्घटना हुन सक्छ । भौतिक सम्पति तथा रुपैया पैसा हराउन तथा लुटिन सक्छ ध्यान दिनुहोला । हप्ताको अन्तमा सरकारि तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्दा संम्यमता अपनाउनुहोला तपाईको खुट्टा तान्नेहरु सक्रिय हुनेछन् ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी¬) साताको शुरुको दिन आईतबारको समय राम्रो भएपनि सोमबारदेखि समय मध्ययम रहेकोले समय तथा परिस्थितिको राम्रो सँग अध्ययन नगरि चल्नाले दुख पाईनेछ भने समयमा काम सम्पन्न नहुदा आर्थिक ब्याबस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरु हावि हुनालेनतिजा उनिहरुकै पोल्टोमा जान सक्छ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईको पक्षमा नआउँने हुनालेमुद्दा तथा झै झमेलामा सामेल नहुनुनै राम्रो रहेकोछ । व्यावसायमा नाफा कमाउँन हरुदिन भन्दा बढिनै संघर्ष गर्नुपर्नेछ भने लगानि बढाउँन केहि समय कुर्नु उपयुक्त हुनेछ । माया प्रेममा बिगतका यादहरुले सताउँने हुदा दैनिक काम गर्न मन जानेछैन । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या बढ्ने तथा झुटा आरोप लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । साझेदारि व्यावसायमा लगानि नवढाउँनु उचित हुनेछ किनकि साझेदारहरु बिच मनमुटाब सिर्जना हुन सक्छ । यात्रा गर्दा ख्याल गर्नुहोला बाटामा बिभिन्न समस्याहरु आईलाग्नेछन् ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू ,से,सो,दा) कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा समय खर्चिनेहरुले समय सापेक्ष परिमार्जन गरि आय आर्जन बढाउँन सक्नेछन् । घर जग्गा खरिद बिक्रि तथा सवारि साधनको कारोबार फस्टाएर जानेछ । बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो गतिलो प्रश्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ भने बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई उछिन्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । आकस्मिक लाभ हुने तथा बाधा अवरोधहरु स्वत हटेर जानेछन् । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्राप्तिको योग रहेको छ । शेयर बजार तथा सट्टाको व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । परिवार तथा सन्तान बाट तपाईले गरेको काममा उल्लेख्य सहयोग पाईनेछ भने माया प्रेम तथा दाम्पत्य जिवनको गाठो झन् गसिलो भएर जानेछ । मुद्दा मामिला तथा न्यायलयबाट हुने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने तथा थप लगानि गर्ने बाताबरण बनेर जानेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि पुराना समस्या भए समाधान भएर जानेछ । मावलि पक्षबाट तपाईको काममा आर्थिक सहयोग हुनेछ भने अघि पछि तपाईको नराम्रा कुरा गर्नेहरु तपाईकै प्रशंसा गर्दै हिड्नेछन् ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) हप्ताको शुरु अर्थात आईतबारको समय राम्रो रहेकोले जनसम्पर्क बढ्ने तथा दाजुभाई, छिमेकिबाट सहयोग पाईने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । छोटो तथा महत्वपुर्ण यात्राको तय हुनेछ । पराक्रम बढेर जाने हुनाले शाहसिलो काम गर्ने जोस जागर बडेर आउनेछ । सोमबार तथा मंगलबार ब्याबस्थापन ज्ञानको कमिले आर्थिका कारोबारहरु बिग्रन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । काममा सहयोग गर्नेहरु भन्दा अल्मल्याउने हरु हाबि हुने हुनालेमहत्वपुर्ण कामहरु थाति रहन सक्छन् । बुधबार तथा बिहिबार समय राम्रो रहेकोले परिवार आफन्त तथा साथिभाईहरुको सहयोग हुने हुनालेसमस्याका पर्खालहरु आफै ढल्नेछन् । शैक्षिक परामर्श तथा चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिरका मानिसहरुलाई शिक्षाको पहुचमा जोड्न सकिने छ । बंश बृद्धिको योग रहेको छ भने सन्तानको प्रगति देखेर मन प्रफुल्लित हुनेछ । शुक्रबार तथा शनिबारको समय मध्ययम रहेकोले सत्रुले दुख दिनेछन् भने न्यायलयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईका पक्षमा हुने छैनन् । निति नियम तथा कानुन नमान्दा फन्दामा परिन सकिन्छ ध्यान दिनुहोला । तपाईको दिन शुभ रहोस ।
आजको राशिफल हे’र्नुहोस् : मिति २०७८ साल भदौ ०३ गते बिहीबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट १९ तारिख
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल भदौ ०४ गते शुक्रबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट २० तारिख
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल चैत्र १३ गते शुक्रबार तदनानुसार इ.स.२०२१ मार्च २६ तारिक
आ’खा भरि आ’शु बनाउदै रि’त्तो हा’त घर ग’ईन सचिनकि आमा , छोराले बो’लायो भने फेरी आउने छु भे’ट्न ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…..
नायक किशोर खतिवडा र लक्ष्मी गदालको पुन:मिलन, मन्दिरमा विहेको नाटक अरुले बनाएको प्लान मात्र थियो ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)